Dureyga doofarada & ciyaaraha Gothia cup - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tabare Sven Ericssson iyo ciyaaryahanada Falastiin & Israa'iil FotoFoto: Björn Larsson Rosvall /Scanpix
Dureyga doofarada & ciyaaraha Gothia cup
La daabacay onsdag 15 juli 2009 kl 16.38
Magaalada Göteborg ee caasimadda labaad dalkan Iswidhan ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta dhalinyarada da’da yar ee Gothia cup. Taratankan oo ay ka qeybgalayaan dhalinyaro tiradooda kor u dhaaftay 34.000 oo ciyaaryahan oo caalamka dacaladiisa kala duwan ka yimid ayaa hadana waxaa jirta cabsi la xirriirta in cudurka hargabka doofaradda uu faafo.
Maanta ayaa waxaa magaalada Göteborg ee caasimadda labaad dalkan Iswidhan ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta dhalinyarada da’da yar ee Gothia cup. Taratankan oo ay ka qeybgalayaan dhalinyaro tiradooda kor u dhaaftay 34.000 oo ciyaaryahan oo caalamka dacaladiisa kala duwan ka yimid ayaa hadana waxaa jirta cabsi la xirriirta in cudurka hargabka doofaradda uu faafo.
”Maadama ay halkani imanayaan dhalinyarro badan kana imanaya caalamka daafihiisa kala duwan, halkaasoo ay hargabka doofaaradu ku faafeen. Qorshaneenu waxa uu yahay in koobankan inuu si suuragal ah u qabsoomo,islamarkaasina uunu gaarin ciyaaryahanada kale haddii ay jiraan qaar xanuunsan” Sidaasi waxaa yiri Ann Söderström oo ah dhaqtarad ka howlgasha hey’ada kahortaga cudurada faafa, islamarkaasina kamid ahkoox si si gaar ah u sameeyey diyaargarow caafimaad oo ciyaarahaasi Göborg ka socda ah.
Qorshana arrintan ayaa ah in in ciyaarhankii dareema xanuun in lugu sameeyo baaritaan la xirriira cudurka hargabka doofaradda. Hoyga ay degan yihiin ciyaarhanadan oo ah iskuulada ku yaala Göteborg ayaa loo sameynayaa qolal gaar ah oo kuwa xanuunsanayo loogu talagalay si dhalinyarada kale ee caafimaadsan aaney u jiran.
Ciyaarahan oo si rasmi ah uga socon doona magaalada Göteborg ayaa waxaa markii ugu horeysay tartankan in ka badan sodon sanno ka qeyb qaadanayo dhalinyaro u dhashay dalkaasi Ciraaq. Markii ugu dambeysay ee kooxda reer Ciraaq ka qeybqaatan tartankan ayaa ahaa sanadii 1980-kii. Kooxda ciyaarahan ka qeybgaleysa ayaa ka kooban lix iyo toban ciyaaryahan dhamaantoodana waxaa la sheegay iney wiilal keliya yihiin.